an ka boTv.ga dawladda taakta daran ee federaalka Somalia ka been abuuray muuqaalo video clip ay xaq u leeyihiin mu´aadininn Somaliland | Somaliland Hargeisa City
an ka boTv.ga dawladda taakta daran ee federaalka Somalia ka been abuuray muuqaalo video clip ay xaq u leeyihiin mu´aadininn Somaliland
3 July, 2013 — somaliland1991
Halkan ka daawo muuqaalo been abuura ah oo ay Tv- dawladda taakta daran federaalka ay ku been abuurayaan in muuqaalo video ah oo mu´aadiniin Somalilandar ahi ay soo geliyeen barta muuqaalada ee YouTube-ka
Waxa ay dadka ka dhaadhicinayaa in tv.goodu. SNTV, Hargeysa tegay oo ka soo duubay muuqaaladan ay leeyihiin, somalilandar dalkii jooga. Muuqaaladan video ah oo aanu mar aan sii fogayn ka soo daynay halkan, Somaliland1991.
Waa wax aad loola yaabo in ay sheegtaan muuqaalo video, Waxa ay sameeyeen in ay dhawr muuqaal oo video clip inta ay isku geegeeyeen oo ay isku daba qabteen ka dibna ka soosaaray muuqaal video isku dhan , laguna dhejiyo shaashada asaanta tv-ga dawladda taakta daran ee SNTV. Astaantan laftigeeda oo ay ka soo koobi gareeyeyen tv.ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo astaantiisu tahay SLNTV. Si ay dadka u khladnaa ama u jahawareeriyaan.
Halkan ka bogo muuqaalka beenta ah ee sameeyeen SNTV, iyagoo ku dhul duubay hees , ujeedaduna ay tahay in ay qariysaan codadkii ku dhex duubnaa cajalada dhabta ah (Original) . Waxa kale oo ay sameeyeen in shucaad ama heer heer galiyaan.
Bal haddaba akhristaw daawo labada muuqaal oo isku barbar dhig. Waxaa kaa soo baxda xukun ku samee.
Muuqaalka xaga sare laga sawiray Hargeysa , waxa ay inamada duubayaa ay taagan yihiin fooqa cusubee u dhistay Dahabshiil ee laga dhisay meeshii hore ee xarunta ciidamadda Tarafikada.
Muuqaalka hore waa Beenta ah ee tv.SNTV ee ay isku gee-geeyeen .
Halkan ka daawo muuqaalka dhabta ee Original ka ah!!
« waxaanu safarkaygani noqon doonaa kii iigu macaanaa ee aan abid baxo, waxaanan rajaynayaa inaanan waligay ilaawin sida la iigu soo dhaweeyey Somaliland
Madaxweynihii dalka Masar ee Maxamed Mursi oo ciidamadda Masar xukunkii ka tuureen. »